Kaamee Masawir Sawir qarsoon leh oo leh Himilo Habeen ah iyo Baadhitaan Motion (W) (SPY002) | Xalka OMG
QAABKA GURIYEYNTA GURYAHA GURIGA: Lens qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo lagu dhejiyo qaabka sawir ahaan sida qurxinta guriga, ku dhawaad ​​aan la ogaan karin haddii aan si taxadar leh u marin. Batroolka la rakibay iyo naqshadaynta khadadka ayaa kuu oggolaanaya inaad ka beddesho buugaagta ilaa miiska ama derbiga si xor ah.
GOOYADA SOO SOCDA HIDDEN CAMERA: Iyada oo tiknoolajiyada madow ee horseeday, kamaradaan basaasku waxay qabsan kartaa sawirada cad ee wadarta mugdiga ilaa illaa 15ft. Wuxuu si toos ah ugu duubi doonaa sawirada aragti habeenkii ah ee ku yaala bey'adda yar.
HESHIISKA HESHIISKA SENSOR: Kamaradda amniga waxay bilaabi doontaa duubista marka ay ogaaneyso sheyga sheyga oo u dhexeeysa 25ft ee qaabka duubista dhaqdhaqaaqa, marnaba ma seegi doono daqiiqado muhiim ah, iyo sidoo kale keydinta bedka iyo nolosha batteriga.
Qaadashada Dhiirigga Dheeraadka ah
1. Kamaradda amniga waxay bilaabi doontaa duubid marka ay ogaanayso sheyga qeyba-dheraadka ah ee u dhigma 25ft qaabka duubista dhaqdhaqaaqa, iyo sidoo kale badbaadinta booska iyo nolosha batroolka.
2. Kamaradani waxay had iyo jeer isha ku hayaan hantidaada markaad fasax ku jirto ama aad shaqeyneyso, hubi in gurigaaga iyo ammaanka xafiiskiina.
1. Looma baahna in laga walwalo kaadhka xusuusta ayaa buuxsami doona, wuxuu si toos ah ugu qori doonaa faylasha ugu da'da leh ee ugu cusbooneysiin leh, fadlan ka bixi faylka muhiimka ah ee fiidiyooga wakhtiga.
2. Fiiro gaar ah: Kumbuyuutarku ma shaqeeyo iyada oo aan lagu rakibin kaadhka micro-sd, waxaad u baahan tahay inaad si gaar ah u iibsato ka hor inta aadan isticmaalin.
1. Si qarsoodi ah loogu dhajiyay lens si ay u dhigmaan qaab sawir ah oo loo yaqaano qurxinta guriga, marnaba ma heli kartid sawirada kamaradaha xitaa markaad eegto.
2. Dhaqdhaqaaqa fudud oo la taaban karo, oo la dhisay iyo dusha laga xirxiray, waxaad u furi kartaa inay istaagto miiska, sidoo kale waxay ku dari kartaa derbiga. Ma aha oo kaliya in loo isticmaalo kamarad qarsoon, laakiin sidoo kale sida qurxinta guriga.
Ku rakibo batroolka 10000mah
1. Ku dhejisan 10000mah Super Battery: Manhajka rikoodhka maalinwalba ilaa saacadaha 30 iyo habeenkii duubista muuqaalka ilaa saacadaha 10. Amaba duubista dhaqdhaqaaqa PIR
2. Kaamiradani shakhsi ahaaneed waa shuruuf ku haboon nidaamka nabadgelyada guriga, xitaa haddii ay jirto adeegga korantada ee korontada.
Aragtida Habeenka Haboon
1. Waxay leedahay saameynta aragga ee habeenkii ugu fiican ee kuyaala loto 1mm, oo leh tiknoolajiyada LED-ka, kamaraduhu ma iftiin wax iftiin ah habeenkii inta lagu jiro shaqada.
2. Aragtida habeenkii ee runta ah: Isbarbardhig waxyaabaha alaabta la midka ah ee dhinaca aragtida aragtida habeenkii, qalabkan xitaa wuxuu ka shaqeyn karaa jawiga madow.
438 Wadarta Views 27 Views Maanta